जम्मु–काश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा १४ महिनापछि रिहा - Sadarline
बाँकेलाई देशकै नमूना जिल्ला बनाउने : मन्त्री राई
मानसरोवरको प्रतिबिम्ब नेपालगन्जमा बनाइने
सदरलाइन संवाददाता २८ आश्विन २०७७, बुधबार १६:५४
काठमाण्डौ : जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती रिहा भएकी छिन् ।
करिब १४ महिनाको हिरासतपछि जम्मू–कश्मीर प्रशासनले उनलाई मंगलबार राति रिहा गरेको हो। गत वर्षको अगस्ट ५ मा जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्य बनाउने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० हटाएसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री मुफ्तीलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।
उनलाई जनसुरक्षा अधिनियमअन्तर्गत हिरासतमा लिएको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको थियो। रिहा हुनेबित्तिकै महबूबा मुफ्तीले अडियो सन्देश जारी गर्दै जम्मू–कश्मीरमा अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी रहने बताएकी छिन् ।
उनले जम्मू–कश्मीरमाथि दिल्लीले गत वर्षको अगस्ट ५ मा चालेको कदम गैर संवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक र गैरकानुनी भएको बताएकी छिन् ।
जम्मू–कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएसँगै पीएसएअन्तर्गत ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको थियो। हिरासतमा लिइएकामध्ये धेरैलाई रिहा गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशम्शेर राणाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई बुधवार सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारीका समयमा उत्कृष्ट काम गरेको बताए । उनले […]
२२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार २०:३२
५ माघ २०७४, शुक्रबार १६:०३
२७ कार्तिक २०७६, बुधबार १८:५५
५ असार २०७४, सोमबार १९:१२
एमालेमा प्रवेशको लहर, माओवादी पूर्व केन्द्रीय सदस्य एमाले प्रवेश